PressReader - Ilanga: 2018-07-09 - "Ubulawe" yilungu lesiKebhe kubangwa owesifazane
"Ubulawe" yilungu lesiKebhe kubangwa owesifazane
Abebekhononda ngalolu daba batalajwe balala ezibhedlela
Ilanga - 2018-07-09 - Izindaba - SKHOSIPHI MTHEMBU LANGA,
SISHUBILE isimo eBunganeni, eMbazwana, emuva kokugwazwa kubulawe umfana wendawo kubangwa intombi kanti kulokhu kusolwa ilungu lesiKebhe - okuyinhlangano elwa nokwebikwa kwemfuyo nezinye izenzo zobugebengu emphakathini.
Isigameko sokubulawa kukaThokozani Nyawo, esenzeke ngeledlule, sishiye amalungu omphakathi ethukile njengoba kulimale nenqwaba yabafana bendawo, okuthiwa bashawe ngamalungu esiKebhe ngoba bezwakalise ukungenami ngokubulawa kukamufi.
Kubikwa ukuthi kuyimanje abafana bendawo bagcwele amathafa emuva kokutalajwa ngamalungu ale nhlangano. Ngokuthola kwe
indaba iqale ngempelasonto yangesonto eledlule ngesikhathi umufi ebambe intombi yakhe inomsolwa, kwagcina kuqubuka ingxabano phakathi kwabo.
Kuthiwa iphelile le ngxabano kanti umsolwa uzobuya ntambama esehamba nozakwabo beyohlasela umufi kubo. Umsolwa kuthiwa wazichaza njengelungu lesiKebhe, washo ukuthi ufuna umufi.
Kubikwa ukuthi kube wukuphu- ma nje kwakhe endlini, bamngenela ngenduku bamfutha nangesisi esikhalisa unyembezi, umsolwa-ke wabe eseyamgwaza. NgoMsombuluko kuthiwa abafana baseBunganeni bacele umhlangano namalungu esiKebhe ngoba befuna ukwazi ukuthi kungani umufi ebulewe.
Kuthiwa amalungu ale nhlangano afike esehlomile, abangenela ngenduku abanye balaliswa esibhedlela. Ilungu lomndeni kamufi - elicele ukungadalulwa ngoba lesaba ukuthi hleze lenzakaliswe - lithi namanje umndeni usashaqekile ngesihluku esisetshenziswe ngumsolwa.
“Beselishayile ihora lokuqala entathakusa ngesikhathi kufika umsolwa ehamba nendodana yakhe. Bafike babopha amalungu omndeni amabili ngozankosi, badlulela kuyena uThokozani bamfu- tha ngesisi esikhalisa unyembezi. Ubalekile bamlandela, okuthe uma bemfica bamgwaza bamshaya nangezagila,” kusho leli lungu lomndeni.
Lithi yize lingenalo ulwazi olugcwele ngembangela yokuhlaselwa kukamufi, kodwa lizwile ukuthi indaba iqalwe yingxabano equbuke emini ehlanganisa intombazane thizeni okuthiwa ibibangwa.
“Umndeni usethukile emuva kwalesi sigameko njengoba sekushaywe nabanye abantu nje ngoba bebuze ukuthi kungani umfowethu ebulewe,” lusho leli lungu lomndeni.
Umthombo weLANGA ozibonele abafana bendawo beshaywa ngamalungu esiKebhe, uthi bekumele bahlangane namalungu ale nhlangano ukuze kuxoxwe ngokuhlaselwa kukamufi.
“Ibuhlungu into engiyibonile, indlela ebezishaywa ngayo izingane, ubungafunga ukuthi kushaywa izigebengu ezenze icala elesabekayo. Impela kumele kube khona okwenziwayo ngesiKebhe ngoba siyabahlukumeza abantu,” kusho umthombo.
UNkk Busi Ntuli uMaQwabe, okushaywe kwalinyazwa indodana kadadewabo kanzima - okuyimanje kubonwa ngokusa kuyona esibhedlela - uthi uselindele noma yini engenzeka kuyona. Utshele ILANGA ukuthi uthole ucingo lumazisa ukuthi makaphuthume emtholampilo indodana yakhe ilimele.
“Ngifike emtholampilo isidluliselwe esibhedlela eNgwelezane ngabe sengiphuthuma khona. Indlela elimele ngayo, udokotela usengitshelile ukuthi mangilindele noma yini njengoba bethi igazi lichithekele ebuchosheni.
“Ngisho ingqondo ihambile kanti selokhu ingeniswe esibhedlela kayikwazi ukukhuluma, kugudluke nenkomishi yedolo,” kusho uNkk Ntuli.
Okhulumela amaphoyisa KwaZulu-Natal, uCapt Nqobile Gwala, uthi kukhona umsolwa oboshiwe ngecala lokubulala kanti uzovela maduze eNkantolo yeMantshi.
ISITHOMBE NGABEFREE IMAGES
SIMUNCU isimo eBunganeni, eMbazwana, emuva kokugwazwa kubulawe umfana wendawo kubangwa intombi.